၂၅ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် ငွေရတု အခမ်းအနား၊ ဆစ်ဒနီ ~ Nge Naing
၂၅ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် ငွေရတု အခမ်းအနား၊ ဆစ်ဒနီ
Sunday, August 11, 2013 Nge Naing4comments
၂၅ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် ငွေရတု အခမ်းအနားအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF သြစကြေးလျားနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးဌာနခွဲမှ ကြီးမှူး၍ဆစ်ဒနီမြို့ Granville Town Hall တွင် 9/08/13 နေ့၌ ည ၆ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ရာ ဆစ်ဒနီရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ မြန်မာ ကွန်မြူနီတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆစ်ဒနီဒေသခံ သြစကြေးလျားလူမျိုးများ စုစုပေါင်း အင်အား၂၀၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် နော်ဆေးဖေါက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို မြင့်မိုမန်တိုင်မီဒီယာမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အခမ်းအနားမှူးက အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း စတင် ကြေညာပြီးသည်နှင့် အလေးပြုခြင်းသုံးရပ်ဖြစ်သော တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်အားအလေးပြုခြင်း၊ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းနှင့် တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားအလေးပြုခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွင်းကျဆုံးသွားသော ရဟန်း ရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်တမိနစ်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် အခမ်းအနားအား စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အခမ်းအနားကို ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်များမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း၊ ရှစ်လေးလုံး မျိုးဆက်မှ ပေါက်ဖွားလာသော မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များမှ 8.8.88 သမိုင်းကို ပြောကြားခြင်း၊ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ကော်မတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ABSDF Australia Branch မှ ကိုသန်းထွဋ်ဆွေမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း၊ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာလနဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်ကာလများတွင် ဖေါ်စပ်ခဲ့သည့် တေးသီချင်းများကို တေးသရုပ်ဖေါ်များဖြင့် သီဆို သရုပ်ဖေါ်ပြခြင်းတို့ကို တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အလံအလေးပြုခြင်း၊ ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းအပေါင်းအား လေးပြုခြင်းနှင့် ၀မ်းနည်းသည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် တမိနှစ် ငြိမ်သက်ပြီးနောက် အမှာစကား ပြောကြားပေးသည့် ဧည့်သည် လေးဦးအနက် ကချင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကရင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်မှ စတင် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကချင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မှ ရှစ်လေးလုံးကာလက သူမ၏အတွေ့အကြုံများနှင့် စကာ အခုလက်ရှိကာလမှာ ဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အခြေအနေများကို ပြောကြားသွားပြီး ကရင်ကိုယ်စားလှယ် စောလွင်ဦးမှလည်း ၂၅ နှစ်ကာလ ဒီမိုကရေစီရေး ဖြတ်သန်းမှုကို အကြမ်းဖြင်းပြောကြား၍ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အရေးအတွက် လက်ရှိလုပ်ဆောင်ရန့် လိုအပ်နေသည့် အချက်များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသား အမှာစကား ပြောကြားသူ နှစ်ဦးအနက် လေဘာပါတီမှ ဖက်ဒရယ် ပါလီမန်အမတ် Laurie Ferguson မှ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး တခြားအစီစဉ် သုံးလေးခုအပြီးမှာ နယူးဆောက်ဝေး ပါလီမန် Green ပါတီမှ လွှတ်တော်အမတ် Jamie Parker က ဆက်ပြောပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံး၏ ပြောကြားချက်များကို လေ့လာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းနောက်ခံ အနှစ် ၆၀ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ရှစ်လေးလုံးမှ စတင်တင်သည့် ၂၅ နှစ်ကြာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကောင်းစွာ လေ့လာထားသူများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုကို ဒီမိုကရေစီအရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ပြောင်းလဲလာသည့် ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် အပြုသဘောဖြင့် မြင်ပြီး ဆက်လက်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ ပြောင်းလဲသွားစေရန် လမ်းကြောင်း မတိမ်းမစောင်းအောင် တည့်မှတ်ပေးသွားရန်လိုကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ Green party အမတ် Jamie Parker မှ ပြောကြားချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးအရ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်နိုင်သည့် အချက်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ကာကွယ်သည့် အစီစဉ်များ ရှိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုပါ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Burma Campaign Australia မှ ဒေါက်တာကျော်မြင့်မှ ဒီမိုရေစီ အရေးအတွက် ကျောင်းသားလူငယ်များ အသက်ပေးရခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း အကျဉ်းချခံရခြင်း၊ တောတွင်းဒေသများကို ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်း စသည့် အဖြစ်အပျက်များကို တသက်မေ့လို့ မရနိုင်ကြောင်းနဲ့ အစချီပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်မှ အရပ်ဝတ်လဲလိုက်ရခြင်းနှင့် လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုသည် ရလဒ်များသည် ၈၈ အရေးတော်ပုံရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ရလာသည့် ရလဒ်များဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှ မမြန်မာများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက် လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများ ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိပြောင်းလဲမှုကို စစ်မှန်သည့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်လာစေရန် ပြည်တွင်းတွင် တကယ်ဦးဆောင်နေသော ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သွားနေသော လမ်းကြောင်းကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုကြောင်း၊ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် ကျန်ရှိနေသေးသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားပြီး မိမိတို့ နေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ရှိ အစိုးရများကို တောင်းဆိုပြီး ဖိအားပေးရန် လိုသလို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်နေမှုကို ရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုနေဖို့လိုကြောင်း စသည်တို့ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရှစ်လေးလုံးကာလအတွင်းတွင် အသက်ပေးဘ၀ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော သူရဲကောင်းအပေါင်းအား အလေးပြုကြောင်းနှင့် မပြီးပြတ်သေးသည့် တိုက်ပွဲအတွက် ကျန်သောသူများမှ အောင်မြင်သည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်ပွဲဝင်နေသူအားလုံးကိုလည်း အလေးပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရှစ်လေးလုံးသမိုင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေများကို အထက်တန်းကျောင်းများတွင် လက်ရှိပညာသင်ကြားနေဆဲ ဖြစ်သော ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ပေါက်ဖွားလာသော မျိုးဆက်သစ် ကလေး သုံးဦးမှ အသေးစိတ် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ မောင်ထွန်းလင်းမိုး (၁၀ တန်း) က မိတ်ဆက်၊ ရှစ်လေးလုံးမတိုင်ခင်အခြေအနေနှင့် အားလုံးပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင် နိဂုံးချူပ်စကားကိုလည်းကောင်း၊ မဆူဇီ (၉ တန်း) က ရှစ်လေးလုံး ကာလလှုပ်ရှားမှု သမိုင်းကို Power Point နှင့် မှတ်တမ်းဖိုင်များဖြင့် တွဲ၍လည်းကောင်း၊ မနန္ဒာက (၁၁ တန်း)က ရှစ်လေးလုံး နောက်ဆက်တွဲနှင့် မပြီးပြတ်သေးသော ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုအတွက် လက်ရှိ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်မျာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှတ်တမ်းရုပ်သံဖိုင် တချို့နှင့်လည်းကောင်း အသီးသီး ပြောကြားသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မောင်ထွန်းလင်းမိုး၏ နိဂုံးချူပ်ပြောကြားချက်တွင်
"We salute all martyrs who sacrificed for democracy and human rights in Burma against illegal military regime. We never forget, never give up. The long journey, for over 50 years struggle for the democracy and human rights which started in 1962 has beenamournful, devastating, intense journey. However the search for democracy hasn’t been completed yet. We, the children of the 8888 generations havearesponsibility to know and continue the history of what our parents attempted to achieve. We would like to request that the Australian people and Government assists in what our parents’ goal is reached. The struggle and search for democracy in Burma hasn’t been completed. Not yet. တရားမ၀င် စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းအပေါင်းအား ကျွန်တော်တို့ အလေးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှလက်မြှောက်အရှုံးပေးမှာ မဟုတ် မေ့လည်းမေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၆၂ မှာ စခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင် ခရီးရှည်ကြီးက ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ကြီးမားတဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေ ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပန်းတိုင်ကိုတော့ မရောက်သေးပါဘူး။ 8.8.88 မျိုးဆက်တွေက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်သစ် ကလေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေလိုလားတဲ့ သမိုင်းကို သိဖို့နဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီသမိုင်းကို ပန်းတိုင်အောင် ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေ မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် သြစကြေးလျားလူထုကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဟာ မပြီးသေးပါဘူး" ဟု ရှစ်လေးလုံးသမိုင်း နိဂုံးချူပ်မှာ မောင်ထွန်းလင်းမိုးက ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီခေါင်းဆောင် ကိုသန်းထွဋ်ဆွေမှ ပြောကြားရာတွင် ဤအခမ်ဒအနား ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးစွာတင်ပြထားပြီး ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဤအခမ်းအနားကို ABSDF Australia Branch မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည် ဆိုသော်လည်း ဆစ်ဒနီမြန်မာကွန်မြူနီရှိ တတခြားအဖွဲံ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များနှင့် အများပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရှိဘဲနှင့် ယခုကဲ့သို့ အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရှိရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း စတင်ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနား ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆက်လက်ပြောကြားသွားပါသည်။ ဤအခမ်းအနားကို ကျင်းပရခြင်းမှာ (၁) အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် (၂) ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက် အသက်ပေးသွားသူများအပေါ် အစဉ်ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုမှု ပေးရန်၊ (၃) မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်ရှင်သန် မပေါ်ပေါက်စေရန် မိမိတို့မျိုးဆက်မှ မျိုးဆက်မှ မွေးဖွားလာသော မျိုးဆက်သစ်များကို မိမိတို့သမိုင်းကို အသိပညာပေးပြီး လက်ဆက်ကမ်းသွားရန် ဟူ၍ ရည်ရွယ်ချက် သုံးခုဖြင့် ကျင်းပရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြီးနောက် အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဟောခန်းမငှားပေးသည့် ဒေါက်တာကျော်မြင့်မှ အစပြု၍ ဤအခမ်ဒအနားအတွက် အခမ်းအနား ပြင်ဆင်ရေး၊ ချက်ပြုတ်ရောင်းချပေးရေး၊ အခမ်းအနားအတွက် လိုအပ်သည့် အလံအစရှိသည်တို့ကို စုဆောင်းရှာဖွေရေး၊ ကျွေးမွေးဧည့်ခံရေး စသည်တို့တွင် ပါဝင်သူ အားလုံး၊ အမှာစကားများ မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားပေးသူများ အားလုံး၊ သီဆိုတီးမှုတ် တေးသရုပ်ဖေါ်ပေးသူများ အားလုံး၊ မှတ်တမ်းတင်ပေးသူ မြင့်မိုရ်မန်တိုင်၊ ရှစ်လေးလုံးသမိုင်း ဟောပြောမှုအတဆွက် စာစီစာရိုက်ပေးသူ၊ အချောသပ် ဆောင်ရွက်ပေးသူများ စသည်ဖြင့် အခမ်းအနားအတွက် ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်အား၊ ငွေအားဖြင့် ဥာဏ်အားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူ များအားလုံးကို အဘက်ဘက်မှ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကောင်း ကျေုးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနား အစီစဉ်များကို စတင်မကြေညာမီကပင် အခမ်းအနားတွင် ရန်ပုံငွေအတွက် 8.8.88 သော့ချိပ်များ ရောင်းချခြင်း၊ မြန်မာအစားအစာများ ချက်ပြုတ်ရောင်းခြခြင်းနှင့် တသီးပုဂ္ဂလထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုကို လက်ခံခြင်းလည်း ရှိပြီး ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေအားလုံးကို ABSDF ဗဟိုသို့ ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ကဏ္ဍတခုပြီးမှ တခုတင်ဆက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ တလှည့်စီ ကြားညှပ် တင်ဆက်သွားသည်ကို တွေ့ရပြီး ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် တေးသရုပ်ဖေါ်များကို တာဝန်ယူတီးခတ်ပေးသော လောကနတ် တီးဝိုင်းမှ အဖွဲ့သားတဦးဖြစ်သူ မန်းကျော်ဆန်း၏ သွေးမှုန်တိုင်းသီချင်း အပြီးမှာ အရေးကြီးပြီ သီချင်းကို အားလုံးသံပြိုင် ပါဝင်သီဆိုပြီး အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု အခမ်းအနား ဖြစ်မြှောက်ရေး ကော်မတီ တာဝန်ခံ
August 19, 2013 at 10:23 AM Reply
Who can comment this article?
ABSDF ၂၅ နှစ်ပြည့် စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း says:
ABSDF ၂၅ နှစ်ပြည့် စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
ABSDF ငွေရတုသဘင်သို့ ကဗျာ (မောင်ကို)